Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) - Page 14 of 21 - Hello Sayarwon
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ)
Dr. Kaung Thar မှ ရေးသားသည်။ 28/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ကဘာလဲ။
မိန်းမကိုယ်ထဲတွင် ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ကောင်းသောဘက်တီးရီးယားသာမက မကောင်းသော ပိုးများလည်း နေကြသည်။ ပုံမှန်တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ရှိခြင်း ဟန်ချက်ပျက်သောအခါ အမျိုးသမီးများတွင် Bacterial vaginosis ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများပိုဖြစ်စေပါသည်။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဤကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် အလွန်အဖြစ်များပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၄၄ ကြားအမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေသော အကြောင်းအရာများကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိနိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ (bacterial vaginosis) ၏ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ-
အနံ့နံသော မီးခိုးဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် အကျိအချွဲများ မိန်းမကိုယ်မှ ဆင်းခြင်း။
ငါးညှီနံ့နံခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံပြီးလျှင် ပိုဆိုးလာခြင်း။
အထက်ပါတို့တွင် မပါဝင်သော လက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်နေသည်များရှိပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သင့်တွင် အောက်ပါလက္ခဏာများရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
အဖြူဆင်းခြင်းပြီး အနံ့နံကာ အဖျားရှိလျှင်
မိန်းမကိုယ်ကို ပိုးဝင်ဖူးပြီး ယခုအချိန်ဖြစ်ရာတွင် ဆင်းသည့် အချွဲများသည် မတူညီခြင်း။
သင့်တွင် လိင်ဆက်ဆံဖော်များလျှင် သို့မဟုတ် အဖော် အသစ်ရှိလျှင်
တစ်ခါတရံတွင် အကြောင်းရင်းတစ်ခုထက်ပို၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော အဖြူဆင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
မှိုစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကို ကိုယ့်ဘာသာ ကုသနိုင်သည်။ လက္ခဏာများ မသက်သာလျှင် အခြားကုသမှုများနှင့် တွဲပြီး ကုသနိုင်သည်။
သင့်တွင် အထက်ပါ လက္ခဏာများရှိပြီး မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ လူများ၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် တုံ့ပြန်မှုများ မတူညီသောကြောင့် သင့်အခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံးကို အဖြေရှာနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့်ပြသပါ။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကောင်းသော ဘက်တီးရီးယားပိုး များလျှင် သင့်မိန်းမကိုယ်အတွက် ကောင်းသည်။ သို့သော် ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများလျှင် သဘာ၀ ဟန်ချက်ကို ပျက်စေပြီး မိန်းမကိုယ် ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
ငါ့ဆီမှာ Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ (bacterial vaginosis) ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အကြောင်းရင်းများမှာ
လိင်ဆက်ဆံဖော်များခြင်း၊ အဖော်အသစ်ရှိခြင်း၊ ထိုအကြောင်းရင်းသည် မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်မသတ်ဆိုင်သော်လည်း ထိုသို့သော အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။ အမျိုးသမီးအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသော သူများတွင်လည်း အဖြစ်များသည်။
မိန်းမကိုယ်ကို မသန့်ရှင်းသော ရေနှင့် ဆေးကြောခြင်း၊ အတွင်းထဲထိ နှိုက်ဆေးခြင်း သည်လည်း မိန်းမကိုယ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ၏ သဘာဝဟန်ချက်ကို ပျက်စေသည်။
ကောင်းသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများ မရှိခြင်းကြောင့်လည်း မိန်းမကိုယ် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ (bacterial vaginosis) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်မှ သင်၏ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို မေးမြန်းပြီး ယခင်က ဖြစ်ဖူးခြင်းရှိ၊မရှိ။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများ ဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိ၊မရှိ သိအောင် မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။
မိန်းမကိုယ်တွင် ပိုးဝင်သော လက္ခဏာများရှိ၊ မရှိ၊ ကို စစ်ဆေးပြီး၊ လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် သင့်မိန်းမကိုယ်ထဲသို့ ထည့်၍စမ်းပြီး ဝမ်းဗိုက်ကို ဖိကြည့်ခြင်းဖြင့် အခြားသော ရောဂါများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
မိန်းမကိုယ်မှထွက်သော အချွဲကို ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် လည်း သိနိုင်သည်။
မိန်းမကိုယ်တွင် pHပမာဏကို တိုင်းခြင်းဖြင့် pH ပမာဏ ၄.၅ ထက် မြင့်နေလျှင် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော မိန်းမကိုယ် ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Bacterial Vaginosis (မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသရန် သင့်ဆရာဝန်မှ အောက်ပါတို့ကို ညွှန်ကြားနိုင်ပါသည်။
Metronidazole (Flagyl, Metrogel-Vaginal, others) ဤ ဆေးကို ပါးစပ်မှသောက်ရမည်။ Metronidazole သည် လိမ်းဆေးအဖြစ်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
Clindamycin (Cleocin, Clindesse, others) ဤ ဆေးသည် မိန်းမကိုယ်ထဲသို့ ထည့်သော ဆေးအဖြစ်ရနိုင်ပါသည်။
Tinidazole (Tindamax)ဤ ဆေးကို ပါးစပ်မှသောက်ရမည်။
အာက်ပါတို့သည် မိန်းမကိုယ်ဘက်တီးရီးယား ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းရောဂါ (bacterial vaginosis) ကို သက်သာစေရန် နေထိုင်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုသမှုများဖြစ်ပါသည်။
မိန်းမကိုယ်တွင် ဓါတ်မတည့်ခြင်းသက်သာစေရန် အနံ့သိပ်မရှိသော ဆပ်ပြာများသုံးပါ။ အနံ့မပါသော လစဉ်သုံးပစ္စည်းများကို သုံးပါ။
မိန်းမကိုယ် အထဲထိနှိုက်ပြီး မဆေးကြောပါနှင့်၊ မိန်းမကိုယ် အတွင်းပိုင်းသည် သဘာဝအတိုင်းသန့်ရှင်းနိုင်သောကြောင့် ဆေးကြောရန် မလိုပါ။
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ပါ။ သင့်အဖော်ကို ကွန်ဒုံးသုံးခိုင်းပါ။ လိင်ဆက်ဆံဖော်မများစေရန် ကန့်သတ်ပါ။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ပါ။
သင့်တွင် အခြားမေးမြန်းလိုသည်များရှိလျှင် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bacterial vaginosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bacterial- vaginosis/symptoms-causes/dxc-20198414 .
Bacterial vaginosis. http://www.webmd.com/sexual-conditions/tc/bacterial- vaginosis-topic- overview#1. Accessed
Bacterial vaginosis. http://www.medicinenet.com/bacterial_vaginosis_causes_symptoms_treatment/article.htm.
မိန်းမကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ သက်သာစေဖို့
စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းမကိုယ် အဖြူဆင်း ခြင်းများ